DEUS Esports အနိုင်ရသွားတဲ့ OPPO | PUBG Mobile Myanmar Championship – Gaming Noodle
DEUS Esports အနိုင်ရသွားတဲ့ OPPO | PUBG Mobile Myanmar Championship
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ အသင်းပေါင်း ၆၀၀ ကျော် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ OPPO | PUBG Mobile Myanmar Championship ပြိုင်ပွဲရဲ့ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်က Melia Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပထားသလို လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက် အပျော်တမ်းသေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်ကွင်းငယ်၊ PUBG Mobile UI ပုံစံ Photo Booth စတာတွေအပြင် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွေ၊ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် Big Bag ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေ စသဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ၆၄ သင်း အုပ်စုအဆင့်ကနေ တက်လာတဲ့ အသင်း ၁၆ သင်းသာ ကျန်ရှိတော့ပြီး5Rounds ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ တစ်ပွဲမှ Chicken Dinner မရခဲ့ပေမယ့် ရမှတ်ကောင်းတဲ့ DEUS Esports အသင်းက ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး ပထမဆုနဲ့အတူ ဆုကြေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
PUBG Mobile ပြိုင်ပွဲတွေကို ပြည်တွင်းမှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကျင်းပလာကြပြီး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ ချန်ပီယံတွေကလည်း မတူညီတာ များပါတယ်။ အခုချန်ပီယံဖြစ်သွားတဲ့ DEUS Esports အသင်းမှာ ယခင် Team No Trend မှာ ကစားခဲ့တဲ့ Zero, Kendo, blinkz တို့သုံးဦး၊ ယခင် Team AoJ ကစားသမားဟောင်း Wicked နဲ့အတူ Trojan Esports အသင်းသားဟောင်း LuYoteMar ကပါ နည်းပြအဖြစ် ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက DEUS Esports အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဟာ နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ မြင့်မြတ် ဖြစ်တယ်လို့လည်း သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တွင်ကျယ်လာတဲ့ Esports မြင်ကွင်းထဲကို နိုင်ငံကျော်တွေလည်း ဝါသနာအရ ဝင်ရောက်လာကြပြီလားလို့ ဝမ်းမြောက်စရာပါ။
Round5ခုမှာ Chicken Dinner ရခဲ့တဲ့အသင်းတွေကတော့ CJ7, Rest In Peace, T7 Challengers, Yangon Galacticos, Rest In Peace (အစဉ်လိုက်) ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတွေရဲ့ နောက်ဆုံး Standing နဲ့ ရရှိသွားတဲ့ ဆုကြေးငွေတွေကတော့ –
1. DEUS Esports – US$ 15,000
2. T7 Challengers – US$ 8,000
3. Rest In Peace – US$ 6,000
4. Alive or Dead – US$ 3,000
5. Yangon Galacticos – US$ 1,000
6. Myrmidon MM – US$ 1,000
7. Team Fuhrer – US$ 1,000
8. CJ7 – US$ 1,000
9. Angels of Death – US$ 500
10. Sama Dojo – US$ 500
11. Underdog – US$ 500
12. Team Fury Juniro – US$ 500
13. Unrated – US$ 500
14. Monster Demons – US$ 500
15. CSD Esports – US$ 500
16. I Cloud Esports – US$ 500 တို့ အသီးသီးဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ်ထဲမှာ မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားသူဦးရေ တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူ စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာတွေက ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ Mobile Esports ပြိုင်ပွဲတွေ လစဉ်လတိုင်းမြင်တွေ့လာရတာ ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် PUBG Mobile ဂိမ်းမှာ လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် National League ပုံစံမျိုး ကျင်းပပေးတာ မရှိသေးသလို အခုပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း ၂၀၁၉ အကုန်လောက်ထိ Tencent မှ တရားဝင်ကျင်းပမယ့် ပြိုင်ပွဲကြီးတွေ ရှိဦးမှာမဟုတ်ဘဲ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ကျင်းပမယ့် King of Hill ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသာ ရှိတော့မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Gaming Noodle ကနေ ပြည်တွင်းပြည်ပ Esports နဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းအကြောင်းအရာတွေကို စုံလင်စွာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
DEUS Esports အနိုငျရသှားတဲ့ OPPO | PUBG Mobile Myanmar Championship
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာတော့ အသငျးပေါငျး ၆၀၀ ကြျော ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ကွတဲ့ OPPO | PUBG Mobile Myanmar Championship ပွိုငျပှဲရဲ့ ဖိုငျနယျပှဲစဉျကို ရနျကုနျမွို့၊ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးပျေါက Melia Hotel မှာ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ ခမျးခမျးနားနားကငျြးပထားသလို လာရောကျကွညျ့ရှုသူတှအေတှကျ အပြျောတမျးသနေတျပဈလကေ့ငျြ့ကှငျးငယျ၊ PUBG Mobile UI ပုံစံ Photo Booth စတာတှအေပွငျ ကံစမျးမဲအစီအစဉျတှေ၊ နိုငျငံကြျောအဆိုတျော Big Bag ရဲ့ ဖြျောဖွမှေုတှေ စသဖွငျ့ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးဖိုငျနယျပွိုငျပှဲမှာတော့ ဒုတိယအဆငျ့ဖွဈတဲ့ ၆၄ သငျး အုပျစုအဆငျ့ကနေ တကျလာတဲ့ အသငျး ၁၆ သငျးသာ ကနျြရှိတော့ပွီး5Rounds ယှဉျပွိုငျခဲ့ရာမှာ တဈပှဲမှ Chicken Dinner မရခဲ့ပမေယျ့ ရမှတျကောငျးတဲ့ DEUS Esports အသငျးက ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပွီး ပထမဆုနဲ့အတူ ဆုကွေးငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၅၀၀၀ ကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
PUBG Mobile ပွိုငျပှဲတှကေို ပွညျတှငျးမှာ မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျကငျြးပလာကွပွီး ပွိုငျပှဲတဈခုနဲ့တဈခုမှာ ထှကျရှိလာတဲ့ ခနျြပီယံတှကေလညျး မတူညီတာ မြားပါတယျ။ အခုခနျြပီယံဖွဈသှားတဲ့ DEUS Esports အသငျးမှာ ယခငျ Team No Trend မှာ ကစားခဲ့တဲ့ Zero, Kendo, blinkz တို့သုံးဦး၊ ယခငျ Team AoJ ကစားသမားဟောငျး Wicked နဲ့အတူ Trojan Esports အသငျးသားဟောငျး LuYoteMar ကပါ နညျးပွအဖွဈ ပါဝငျထားတာဖွဈပါတယျ။
စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက DEUS Esports အသငျးရဲ့ပိုငျရှငျဖွဈသူဟာ နာမညျကြျောသရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ အကယျဒမီ မွငျ့မွတျ ဖွဈတယျလို့လညျး သတငျးရငျးမွဈမြားက ဆိုပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ တှငျကယျြလာတဲ့ Esports မွငျကှငျးထဲကို နိုငျငံကြျောတှလေညျး ဝါသနာအရ ဝငျရောကျလာကွပွီလားလို့ ဝမျးမွောကျစရာပါ။
Round5ခုမှာ Chicken Dinner ရခဲ့တဲ့အသငျးတှကေတော့ CJ7, Rest In Peace, T7 Challengers, Yangon Galacticos, Rest In Peace (အစဉျလိုကျ) ဖွဈပါတယျ။ အသငျးတှရေဲ့ နောကျဆုံး Standing နဲ့ ရရှိသှားတဲ့ ဆုကွေးငှတှေကေတော့ –
16. I Cloud Esports – US$ 500 တို့ အသီးသီးဖွဈပါတယျ။
အခုနှဈထဲမှာ မိုဘိုငျးဂိမျးကစားသူဦးရေ တဟုနျထိုးမွငျ့တကျလာမှုနဲ့အတူ စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီကွီးတှနေဲ့ မိုဘိုငျးအျောပရတောတှကေ ကွီးမှူးကငျြးပတဲ့ Mobile Esports ပွိုငျပှဲတှေ လစဉျလတိုငျးမွငျတှလေ့ာရတာ ဝမျးသာစရာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ PUBG Mobile ဂိမျးမှာ လောလောဆယျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ National League ပုံစံမြိုး ကငျြးပပေးတာ မရှိသေးသလို အခုပှဲပွီးသှားတဲ့အခါမှာလညျး ၂၀၁၉ အကုနျလောကျထိ Tencent မှ တရားဝငျကငျြးပမယျ့ ပွိုငျပှဲကွီးတှေ ရှိဦးမှာမဟုတျဘဲ နိုဝငျဘာလထဲမှာ ကငျြးပမယျ့ King of Hill ပွိုငျပှဲတဈခုသာ ရှိတော့မယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ Gaming Noodle ကနေ ပွညျတှငျးပွညျပ Esports နဲ့ ဗီဒီယိုဂိမျးအကွောငျးအရာတှကေို စုံလငျစှာ တငျဆကျပေးနပေါတယျ။